galmudugnews.com » Garoonka Diyaaradaha Lambar 50 Oo Dib U Furmay
Home » WARARKA » Garoonka Diyaaradaha Lambar 50 Oo Dib U Furmay Garoonka Diyaaradaha Lambar 50 Oo Dib U Furmay galmudug on
Sep 20th, 2012 //
No Comment Views 16275Maamulka Gobalka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay dib loo furay garoonka diyaaradaha Lambar 50 kaddib markii uu in muda ah uu ahaa Al-Shabaab meel ay ku tababartaan.
Guddoomiyaha gobolka Sh/hoose ee Dowladda Soomaaliya Cabdu Qaadir Maxamed Nuur Siidii oo la hadlaayay idaacadaha maxaliga ah, ayaa sheegay in markii ugu horreysay dhowr sano kaddib garoonka lambar 50 ay shaley soo caga dhigatay diyaarad u kireesan QM, taasoo magaalada Afgooye iyo deegannada ku dhow geesay gargaar.
Wuxuu sheegay in gobalka Shabeelah hoose uu hadda isku diyaarinaayo in sameeyo is badal weyn, taasoo lagu doonayo in uu gobalka ku noqdo siddii hore.
Gobalka Shabeelaha Hoose waxa uu ka mid ahaa gobalada dhawaan laga qabsaday Al-Shabaab kuwaasoo hadda xooggooda isku geeyay Kismaayo.
Gobalka ayaa dadka ku dhaqan waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyin ay ku hayaan rag ku labisan dareeska ciidamada dowladda laakin arrintaas wax badan la qabtay sida uu sheegay guddoomiyaha gobalka Shabeelaha Hoose.
Magaalada Marka oo ah xarunta gobalka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ay ka mid ahayd meelihii ugu dambeey ee la qabsaday Al-Shabaab, isla markaana waxa ay ka mid tahay meelaha uu dhaqaalaha badan ka soo gali jiray.
Waa markii ugu horreysay ee diyaar ad u kireesan QM ay ka soo degto garoonka lambar 50, oo markii hore ahaa garoon uu ka soo dego qaadka la keeno Soomaaliya, sidoo kale garoonkan waxa uu markii dowladii dhexe ahaa garoon ay isticmaalaan ciidanka xooggan Soomaaliya oo ma ahayn garoon diyaaradaha rayidka ay isticmaalaan.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21013 hitsContact US - 19642 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15738 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15170 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13938 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13875 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13819 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13414 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11772 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11745 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11726 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11525 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11504 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11357 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11168 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11147 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11054 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11041 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10751 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10352 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10266 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10208 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10012 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9943 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9782 hits Home About